एक किलो हरियो तरकारीको मूल्य १ लाख ३८ हजार ! - टि. एल. एन पोस्ट
Home Uncategorized एक किलो हरियो तरकारीको मूल्य १ लाख ३८ हजार !
मंहगीले नेपाल मात्र होइन पुरा विश्व आक्रान्त छ । विशेषत तरकारीको मुल्य अत्यधिक महंगो हुने गरेको छ । तथापी हामी त्यसलाई किनेर खादैं आएका छौ । तर आज हामी यस्तो तरकारीको बारेमा चर्चा गर्दैछौ, जसलाई किन्न धनीभन्दा धनी व्यक्तिले पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ ।
कुनै तरकारीको मुल्य बहुमुल्य धातु चादिँको मुल्य भन्दा बढि पर्ला ? तर विश्वमा एउटा यस्तो तरकारी छ जसको मुल्य चादिँको मुल्य भन्दा महंगो छ । अर्थात यो तरकारीको स्वाद लिन तपाईले १ लाख ३८ हजार खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यस महंगो तरकारीको नाम हो, हप शूट्स (Hop Shoots) । यो हरियो तरकारीको मुल्य प्रतिकिलो १ हजार युरो रहेको छ । जसलाई हतपत कसैले किन्ने आँट गर्दैनन् ।
हप शूट्स नामक यस तरकारीको फूल समेत राम्रो मानिन्छ । यसको फूललाई हप कोन्स (Hop Cones) भनिन्छ । यो फूल बीयर बनाउन प्रयोग गरिन्छ । यो तरकारी महंगो हुनुका पछाडी यसमा पाइने औषधीय गुणको भण्डार रहेको छ । यो एन्टीबायोटिक औषधी बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।
Previous articleग्रीनलाइफ हाइड्रोको शेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट, कति पुग्यो प्रतिकित्ता ?
Next articleआउने भयो अदितिको अर्को नेपाली फिल्म
परपुरुषसँग हाँसेको भन्दै श्रीमतीको कान काट्ने श्रीमान पक्राउ